Kenya oo diiwaan-gelisay qofkii ugu horeeyay oo u dhintay fayruska - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Kenya oo diiwaan-gelisay qofkii ugu horeeyay oo u dhintay fayruska
Kenya ayaa diiwaan-gelisay qofkii ugu horeeyay ee u geeriyooday caabuqa dunida faraha kulul ku haya ee Coronavirus.
Bukaanka, 66-jir muwaadin ah, ayaa muddo la tacaalayey xaalado caafimaad, sidda ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka, Khamiista maanta ah.
“Ninka, oo qabay cudurka sonkorta, waxa uu dalka soo galay 13-ii Maaj isagoo Koonfur Afrika u soo maray socdaal uu kaga yimid Swaziland,” sidaas war-saxafadeed ku yiri Mutahi Kagwe, xoghayaha Wasaaradda.
Sidda ku xusan bayaanka, galabnimadii Khamiista maanta ah ayaa la dhigay qeybta xaalada deg-dega ah ee Isbitaalka Aga Khan.
Isla maanta, Kenya waxay shaacisay in tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka ay ku darsantay saddex, taasoo wadarta guud ka dhigtay 31.
Dhamaan dadka laga helay fayruska waxay yihiin muwaadiniin Kenyan ah oo la kulmay shaqsiyaad uu lasoo darsay xanuunka.
Wasaaradda Caafimaadka, sidda laga soo xigtay warbaahinta gudaha, ayaa sheegtay in ay ku raadjoogto 906 qof oo la kulmay dad uu horey ugu dhacay cudurka, 18 oo kamid ah dadkaas waxay ka qaadeen isbitaalada
Previous article(Communique) Inside Al-Shabaab’s “crisis conference” amid US military airstrikes in Somalia
Next articleRa’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde oo la xanuunsan Coronavirus